ल’कडाउनको का’रण दूध बिक्रीवितरण नभएपछि सडकमा दूध पो’ख्दै किसान! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
ल’कडाउनको का’रण दूध बिक्रीवितरण नभएपछि सडकमा दूध पो’ख्दै किसान!
बाँके । ब’न्दाबन्दीका का’रण दूध बिक्रीवितरण नभएपछि बाँकेका किसानले दूध पो’ख्न बाध्य भएका छन् । कोहलपुर नगरपालिका– ८ पिपरीस्थित प्रकृति गाईपालन के’न्द्रका किसान विष्णु पोखरेलले मङ्गलबार बिक्री नभएपछि ४० लिटर दूध सडकमै पोख्नुभएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानको को’हलपुरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले मङ्गलबार दूध खरीद नगरेका कारण दूध पोख्न बाध्य भएको पोखरेलले बताउनुभयो । कोभिड–१९ स’ङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीले दूधको बि’क्रीवितरण प्रभावित भएपछि पोखरेल जस्तै यहाँका दूध उत्पा’दक किसानदेखि दुग्ध व्यवसायी दैनिकजसो दूध पोख्न बाध्य छन् ।
दुग्ध व्यवसायीसँगै पशुपालनमा आधारित रहेर घरपरिवार चलाउँदै आएका किसानको लगानीसमेत घाटामा गइरहेको छ । बन्दाबन्दीका कारण डेरीले दूध खरीद नगरिदिँदा प’शुपालन व्यवसाय पनि धराशायी हँुदै गएको डु’डुवा गाउँपालिका –२ बेतहनीका किसान रामसोहन यादव बताउनुहुन्छ । गाउँबाट नेपालगञ्ज ल्याइएको दूधसमेत बिक्री नभका कारण पोखेर घर फ’र्कनुपरेको उहाँको गुनासो छ ।
ठूलो परि’माणमा दूध सङ्कलन गरी बिक्रीवितरण गर्दै आएको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को को’हलपुरस्थित नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयो’जनाले बन्दा’बन्दीपछि दूध सङ्क’लनमा ५० प्रतिशत क’टौती गरेको छ । आयो’जनाले दैनिक १३ हजार लिटर दूध खरीद गर्ने गरेकामा बन्दाबन्दीपछि त्यसलाई घटाएर दैनिक ६ हजार लिटर सङ्कलन गर्ने गरिएको आयोजनाका प्रमु’ख योगेन्द्र साहले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, दैनिक स’ङ्कलन हुने १३ हजार लिटर दूधमध्ये एक हजार टिर बाँकेमा खपत गरी बाँकी १२ हजार लिटर पाउडर प्रशोधनका लागि चितवन र पोखरा पठाइन्छ । कोरोनाका कारण अहिले ५० प्रतिशत मात्रै दूध लिने गरेकाले दूध सङ्कलनमा पनि कटौती गर्नुपरेको हो ।
पोखरा जाने दूधमा ५० प्रति’शत क’मी भएसँगै बाँकेमा किसानबाट दूध सङ्कलनमा पनि कमी गरिएको आयोजना प्रमुख साहले बताउनुभयो । ‘लक’डाउनको शुरुमा एक हप्ता त होलिडे नै भयो, अहि’ले त्यस्तो छैन । सबै कि’सानको दूध खरीद गर्न सकेका छैनौँ, जसले फोन गर्छ, समस्या छ, उसको लिएका छौँ । आफैँ व्यवस्थापन गरिरहेका कि’सानको खोजिनिती गरेका छैनौँ’,उहाँले भन्नुभयो ।
Previous ख्याल गरौं :आजदेखि ल’कडाउनमा थप कडाइ, बाहिर निस्कनेलाई मु*द्दा चलाइने!
Next म रा’जाबादी हैन तर आज म यति बोल्छु बोल्छु – ज्वाला संग्रौला